Ama-Proteas women alungele ukufinyelela ku-5-0
Umqeqeshi obambile wama-Momentum Proteas, u-Salieg Nackerdien ukholwa ukuthi iqembu lakhe lingakwazi futhi lizofinyelela kwigoli labo lokunqoba i-Cricket South Africa (CSA) Women’s ODI series ngo-5-0 uma behlangana ne-Bangladesh umdlalo wokugcina ngoMsombuluko. Umqeqeshi uyathemba ukuthi iqembu lizophinda idlale ngendlela efanayo kuze kube yimanje futhi bangahlulwa kwi-series uma bedlala e-Mangaung Oval e-Bloemfontein.
Nokho iqembu lasekhaya lizihlulile izivakashi ngama-runs angu-106 kumdlalo wokuqala. Ama-wicket ayisishagalolunye kowesibili noqesithathu kanye nama-runs angu-154 kowesine, u-Nackerdien ukholwa ukuthi sikhona isikhala sokulungisa futhi ufisa ukubona abadlali behlangana nenselelo maduzane.
“Sibe ne-tour enhle kuze kube yimanje,” esho. “Iqembu belidlala kahle ngamakhono. Sikhulumile ngezindawo ezimbalwa okumele zibhekwe, njengokungaphumi kalula kanye nokulahlekelwa ama-wicket ngokuhlangana futhi ngasekuphoseni, ukunciphisa ama-extras.”
“Sifuna ukuqhubeka nezinga ebesivimba ngayo enkundleni esiyigcinile, ebiyinhle kuyona yonke i-series okwamanje kanye nokuba ngaphezulu kuzona zonke izigaba. Sidinga noma umdlali oyedwa ukuthi ashaye okhulu, yilelo igoli futhi sithemba ukuthi uzoshaywa umdlali oshaya phezulu kulaba abayisithupha.”
u-Nackerdien ulithandile ugqozi leqembu ekunqobeni imidlalo. Abashayayo kanye nabaphosayo bahlelile noma banqobe imidlalo beyinqobela iqembu lasekhaya, abadlali abathathu abahlukile beyi-player of the match atholwe i-South Africa. Usekela kapteni, u-Chloe Tryon wathola amabili, kumdlalo wokuqala nowesine.
“Kuyajabulisa ngempela,” esho eqhubeka. “Sifuna ukudlala kanjalo, wonke umuntu edlala indima ukuze kunqobe iqembu. Uhlelo lolo uma siqhubeka sidlala i-series kanye nemiqhudelwano elandelayo, ukuhlezi senza kangcono njengeqembu futhi nokuba nabadlali abahlukile bedlala indima kanye nokusinqobisa.”
Umdlali onama-runs amaningi ovulayo u-Lizelle Lee nama-runs angu-200 kuma-innings amane, o-50 ababili kanye nama-runs amakhulu angu-70. Ushaya nge-average engu-66.66, o-four abangu-26 no-six ababili. Olandelayo u-Tryon, nama-runs angu-125 nge-average engu-62.50 ne-strike rake engu-148.80. u-Ayabonga Khaka uhamba phambili ngokuthola ama-wicket angu-7/54 kuma-innings amane (22 overs) futhi unama-best bowling figures angu-3/13. Ulandelwa u-Raisibe Ntozakhe no-7/57 (32 overs).
“Sisendaweni enhle, umdlandla omuhle kuyela kwi-series ne-England enyangeni ezayo,” esho eqhubeka u-Nackerdien. “Sisathuthuka, silungisa zonke izikhathi futhi sisebenzela ukushintsha o-70 babe o-100 bese ama-three-wicket-hauls abe ama-five-fors.”
“Kusasa kuzoba ithuba elihle lokuthi iqembu liyiqede kahle i-series futhi linqobe amagoli abo esiwahlelile ngoba asizikhathazi kakhulu ngalaba esidlala nabo, sibheka kakhulu ukuthi njengama-Momentum Proteas singenzani ukuze kube nesiqiniseko sokuthi singaphambili kuhambo oluhle.
Umdlalo wesihlanu futhi wokugcina we-ODI uzoqala ngo-09:45 futhi ukuhamba komdlalo kuzotholakala ku-www.cricket.co.za. futhi okunye kuzotholakala ku-Facebook (www.facebook.com/cricketsouthafrica) no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa).
Ama-Proteas Women anqoba emine kwemine Ama-Proteas azimisele ukunqoba i-ODI series e-Kimberley Ama-Proteas women anqobe umdlalo wokuqala bedlala ne-Bangladesh u-Salieg Nackerdien ubekwe njengomqeqeshi obambile wama-Momentum Proteas Ama-Proteas women akulungele ukuhlangana ne-Bangladesh i-Cricket South Africa imemezele amaqembu ama-Proteas women azodlala ne-Bangladesh Ama-Proteas aqede ngokunqoba i-ODI series